Kugara neInvestment yeHong Kong uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muHong Kong ye:
● Kugara nekudyara muHong Kong
● Ugari nekudyara kubva kuHong Kong
● Visa yegoridhe muHong Kong
● Pasipoti yechipiri kubva kuHong Kong
● Kugara nekudyara kweHong Kong nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muHong Kong uye Magweta e Kugara patsva neInvestment muHong Kong uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muHong Kong zvinoshanda pamwe chete kuitira kuchengetedza kwevatengi.
Kugara patsva nemaInvestment vamiririri veHong Kong vanopa mabasa ekugara nekudyara muHong Kong, Kugara patsva nezvirongwa zvekudyara muHong Kong, Kugara nehurongwa hwekudyara muHong Kong, kwechipiri Kugara nekudyara muHong Kong, mbiri Residency nekudyara muHong Kong, ugari nekugara nekudyara muHong Kong, Kugara zvachose nekudyara muHong Kong, Kugara kwechinguva nekudyara muHong Kong, Kugara nehurongwa hwekudyara muHong Kong, Kugara nenzvimbo dzekudyara muHong Kong, Citizenship nekudyara kuHong Kong, Citizenship nekudyara zvirongwa muHong Kong, Citizenship nehurongwa hwekudyara muHong Kong, wechipiri Ugari nekudyara muHong Kong, hunyanzvi hwehukama nekudyara muHong Kong, pekugara uye ugari nekudyara muHong Kong, ugari uye ugari nekudyara muHong Kong, hupfumi Citizenship zvirongwa muHong Kong, Ugari nehurongwa hwekudyara muHong Kong, Ugari nezvirongwa zvekudyara muHong Kong , yechipiri pasipoti muHong Kong, yechipiri pasipoti zvirongwa muHong Kong, yechipiri pasipoti chirongwa kuHong Kong, mbiri yechipiri pasipoti muHong Kong, pekugara uye yechipiri pasipoti kuHong Kong, repamutemo repasipoti repiri kuHong Kong, repiri pasipoti nekudyara kuHong Kong , yechipiri ugari pasipoti muHong Kong, yechipiri pasipoti chirongwa kuHong Kong, yechipiri pasipoti zvirongwa muHong Kong, goridhe vhiza kuHong Kong, vhiza yendarama kuHong Kong, goridhe vhiza zvirongwa kuHong Kong, goridhe vhiza chirongwa kuHong Kong, yechipiri goridhe visa kuHong Kong, yechipiri vhiza vhiza chirongwa kuHong Kong, mbiri yegoridhe visa muHong Kong, ugari uye vhiza vhiza kuHong Kong, kugara uye vhiza yegoridhe kuHong Kong, goridhe vhiza ugari kuHong Kong, goridhe vhiza hurongwa muHong Kong, zvirongwa zvegoridhe zvevisa muHong Kong.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muHong Kong nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muHong Kong yeResidency nekudyara: USD 1,300,000
Nhanganyaya Hong Kong uye Residency neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveHong Kong
Hong Kong, zvinoreva kuti 'anonhuwirira chiteshi', iguta rine hupenyu uye rinopa simba. Iko kusanganisa kusanzwisisika kwemazuva ano kwakakwira kukwira uye makomo mahombe anoita kuti nzvimbo iyi ive inoshamisa uye inoshamisa.
Hong Kong inoonekwa senzvimbo uko 'kumabvazuva kunosangana kumadokero' uye kunogara vekare neutsva imwe iri padivi peimwe. Nzvimbo dzayo dzakazara nezvinonhuwira, zvivakwa zvemuganho, uye girazi-uye-simbi kukwira kumusoro, pamwe chete nemagungano ayo ekare nemhemberero dzine simba, zvaita kuti Hong Kong ive musangano wehupenyu.
Seyakakosha mari yepasirese yemari, mutero wayo wepasi uye kutarisira kwakakwirira kwehupenyu kubvira nguva yakati yapfuura yakadhonza vanhu kubva kwese kwese pasirese. Heano zvimwe zvikonzero nei mumwe achifanira kusarudza Hong Kong yehupenyu huri nani:
Hong Kong ndiyo inotungamira kuenda kuAsia uye munguva pfupi, unogona kuwana nzendo dzinoenda kunhamba huru yekupokana inosanganisira Philippines, Sri Lanka, Thailand, Singapore, Japan, Taiwan, Malaysia, kungopa mimwe mienzaniso! Uine ingangoita gumi nemashanu emabhengi pagore iwe unogona kukoshesa magumo evhiki mumitambo kubva kuVietnam kuenda kuBali kuenda kuBorneo. Tinoda kutaura zvimwe?
Hong Kong ine imwe yematanho mashoma epasirosi pasirese zvisinei nedunhu rine rimwe remaguta ane vanhu vakawandisa. Kazhinji inoratidzirwa seguta rakachengetedzeka zvakanyanya pasi, zvikamu zvematsotsi mashoma zvinoita Hong Kong nzvimbo yakanakira iwe yekugara.
Asingazivikanwi kune vashoma, Hong Kong harisi iro chete renje reguta; ine yakawanda inoshamisa yakavhurika nzvimbo dzakashama! Yakazara nematunhu eanoshamisa hukuru hukuru, uku kukwirisa kweguta uye zvakasikwa zvinoshamisa zvechokwadi. Mukati memaminetsi gumi nemashanu unogona kuve kunze kweguta uye pamhenderekedzo yegungwa yakanaka kana mumakomo. Dzikama mweya kubva mukumhanyisa uye ongorora zviwi zviri kure, mataundi anoda kuziva, kana nzira dzemakomo.
Vhura mhepo Nhandare
Hong Kong inogadzirwa neinosvika makumi manomwe kubva muzana% nzvimbo yakasvibirira, zvinopfuura mazana maviri nezvitsuwa, uye inopfuura mazana matatu materu. Uine zvakawanda zvekunze zvekurovedza padhuze nepamba, zvirokwazvo hauzoneti. Iwe unogona kukoshesa kufamba-famba, kukwira, uye kumhanya munzira dzemakomo, kunze, kukwira, kuchovha bhasikoro, grills yegungwa, madziva eruzhinji, uye isu hatifanire kuregeredza marara eigwa
Hong Kong inozivikanwa nekuve iyo 'yekudyira guta guru reAsia' uye neanopfuura gumi nemana eateries ekukutarisa pamusoro pako zvachose haizove nenzara.
Chikafu muHong Kong chakashandurwa uye iwe unogona kutarisira kuwana maIndia, Thai, Vietnamese, uye Lebanese yekubika masitayera sezvakawanda maAmerican, Italian, neFrance maresitorendi zvisinei neCantonese inobata. Unogona kunakirwa nechikafu chemumugwagwa icho chinodhura akati wandei eHong Kong Madhora kana inokatyamadza Michelin nyeredzi eateries. Vamwe vanoti chikafu chega chikonzero chakaringana kuenda kuguta!
Sisitimu yemotokari iripo nhasi, yakakwana, uye pamusoro pezvose, yakasimba. Iko kune assortment yesarudzo yekukutora kubva kuA kuenda kuB uye pamari shoma yemutengo, zvaizokubhadharira chero nzvimbo. Izvi zvinosanganisira tekisi, MTR (chubhu / metro), mota dzematare, uye zvifambiso. Sisitimu yemota yeHong Kong ine zvibereko zvakasarudzika zvichiita kuti zvive zvakanaka kutenderera
Mutero muHong Kong wakaderera, nemumwe mutero wemari uri kufukidzwa pa17 muzana. Vagari vaviri uye ex-pats vanobhadhariswa mutero kungave anoshandura maviri muzana kusvika 17 muzana kuvimba nezinga ravo remari kana chiyero chakaenzana che15 muzana. Hazvina kuoma kuona chero chikonzero nei nyanzvi dzisingaperi dzinobva kunze kwenyika dzichienda kuHong Kong.
Iyo yekare-pat network muHong Kong zvinoshamisa muvakidzani uye ndeyezvinangwa zvese nezvinangwa zvisinganzwisisike kwete kuronga uye kusanganisa. Pane mukana wekuti iwe unofanirwa kuita shamwari nyowani, sangana neshamwari mune yako indasitiri kana tsvaga mumwe munhu ane enzaniso yekufarira ipapo pachave nekuungana pamwe kukuunganidzira iwe! Kusanganisa chinhu chikuru chekugara pano uye nzira inoshamisa yekuronga nekusangana nevanhu ndeyekuita neimwe yemakirabhu emitambo yeHong Kong. Hatifanire kukundikana kuyeuka kuti FDM inobata mwedzi nemwedzi zviitiko zvevashandi vese uye maAdvista muHong Kong!
Kugara mune iri guta reAsia kunogona kunyatso kuve kusangana kunoputsa, uye izvi zvinongova zvikonzero zvinoverengeka zvatinofunga kugutsikana kwega muHong Kong inopfuura nharaunda dzakasiyana dzemadhorobha.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeHong Kong
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muHong Kong
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Hong Kong
Kugara nekudyara kweHong Kong
Entrepreneur mari yekutsvaga
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweHong Kong
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veHong Kong
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweHong Kong
Hurumende yakatsigira macububhu echirongwa kana kudyara mune dzimwe nzvimbo
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweHong Kong
Imwe yenzvimbo dzinotungamira pasi rese dzemari ndiHong Kong. Zvakare, inofungidzirwa kuva nehupfumi huri kukurumidza kukura. Chikonzero ndechekuti hurumende yeHong Kong inotora mutemo wekutsigira kwakanyanya uye kupindira kushoma mukuita bhizinesi. Izvo zvakakosha kwazvo kutaura kuti Hong Kong ndiyo zvakare gedhi kumusika unobudirira weChinese nekuda kwenzvimbo dzayo uye hukama hwehukama. Pamusoro pezvo, makambani eHong Kong haabhadhari mutero pamari yepasi rose. Iyo yakaderera kwazvo mutero unokodzera kune purofiti inogadzirwa muHong Kong. Vashandi vemabhizinesi muHong Kong vanokwanisa kuwana pekugara kuburikidza nekukurumidza uye kunoshanda maitiro. Nhengo dzemhuri chiriporipowo dzinokodzera, pasina chero chinodiwa chekudyara.
Mhuri inopinda muHong Kong
Kana yako investor visa yatove kuwanikwa, wako wawakaroorana naye uye vasina kuroora vanovimba nevana vari pasi pegumi nemana vanogona kugara newe kuHong Kong. Paunongova mugari wechigarire, iwe nevabereki vemumwe wako vanopfuura makumi matanhatu vanogona kunyorera vhiza yakavimbika kuti vauye kuzogara newe.
Kugara nehurongwa hwekudyara muHong Kong insite
Iyo scheme ine pfupi pfupi yekugadzirisa nguva: chairo kunyorera kunogoverwa mukati memwedzi 2-3. Haufanire kupa ruzivo rwezvakarongwa zvebhizinesi rako, uye haufanire kupa humbowo hwedzidzo. Iwe unozofanirwa kupa humbowo hwekuti iwe une zviwanikwa zvemari zvekuzvitsigira muHong Kong panguva yako yekutonga. Iwe hautenderwe kushanda kana kuwana rubatsiro rweveruzhinji muHong Kong. Uchave nekodzero yekugara zvachose mushure mekuve nemakore manomwe ekugara kwenguva pfupi.
Mari inodiwa yeHong Kong
Kuti uwane pekugara muHong Kong yekudyara, unofanirwa kuisa mari inosvika US $ 1.3 miriyoni mune imwechete kana mubatanidzwa weinotevera: equities, zvikwereti chengetedzo, madipoziti, chikwereti chakaderedzwa kana zvirongwa zvekudyara zvakasangana. Iwe unofanirwa kuchengeta mari yako kana kugara kwako muHong Kong kuri kwechokwadi. Kana kukosha kwekudyara kwako kuchidonha pazasi pemari yawakadyara pakutanga, haufanire kuikwidza. Zvakangodaro, iwe haubvumidzwe kudzinga chero hupfumi hwakawana chero kukosha kwemusika kuchikwira pamusoro pemari yekutanga.
Mutengi kutsigira Residency nekudyara kweHong Kong
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents kuHong Kong uye Residency ne Investment Lawyers yeHong Kong inopa vatengi uye mhuri dzavo kuHong Kong nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuHong Kong, kugara nekudyara kubva kuHong Kong uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira kugari nekudyara kubva kuHong Kong kana Goridhe Visa kubva kuHong Kong kana ugari nekudyara kubva kuHong Kong kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuHong Kong, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida simudza kambani muHong Kong kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muHong Kong uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuHong Kong uye sekondari pekugara.
Rutsigiro Rwakakosha kuneVagari veHong Kong:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeHong Kong, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeHong Kong, inokwanisika investment immigration solicitors kuHong Kong, inokwanisika Residency nemaInvestment consultants kuHong Kong, inokwanisika Residency nemagweta ekudyara eHong Kong uye inokwanisika yekufambisa yekufambisa femu yeHong Kong
Kugara nekudyara kubva kuHong Kong kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muHong Kong kune 37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuHong Kong kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuHong Kong kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuHong Kong kuenda ku106 Nyika.
Kugara patsva nezvirongwa zvekudyara kubva kuHong Kong.
Goridhe visa zvirongwa muHong Kong kune 37 Nyika.
Ugari nezvirongwa zvekudyara kubva kuHong Kong kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuHong Kong kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuHong Kong kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweHong Kong kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muHong Kong nemaonero ekuti mutengi anofanira kuwana kudzoka kwakanaka pane kudyara muHong Kong, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweHong Kong. Tine tie-up nevashoma varidzi venzvimbo muHong Kong vane rondedzero yakanaka uye yavo zvivakwa zviri munzvimbo dzakanaka muHong Kong, kutora zvakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba zvirongwa zvekuHong Kong nekudyara muzvivakwa muHong Kong.
Unoda kuziva - Hong Kong Kugara neInvestment
Kugara neInvestment Gweta reHong Kong kunopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Residency nekudyara kuHong Kong. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara neInvestment kuHong Kong inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda zvekutama kubva kuHong Kong kana kuenda kuHong Kong, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Kugara nekudyara kweHong Kong kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeHong Kong uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira Hong Kong, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi neako Residency nekudyara kunyorera kuHong Kong isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye yemhuri nhengo pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera Hong Kong Magweta edu akasarudzika eResidency nekudyara kweHong Kong uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveResidency nekudyara kunyorera kuHong Kong zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvine hukama zveHong Kong.
Kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweHong Kong changobvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemasevhisi ekudyara muHong Kong kune avo vataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muHong Kong:
Residency nebasa rekudyara kweHong Kong hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera maoko nezvombo kubva kana kuHong Kong.
Residency nezvirongwa zvekudyara zveHong Kong hadzipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muHong Kong kana maindasitiri espionage emapurogiramu ekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuHong Kong.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweHong Kong hadzipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muHong Kong.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeHong Kong hazvisi zvevanhu vanobata maGenetic zvinhu muHong Kong.
Residency nebasa rekudyara kweHong Kong haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiri kana zvombo zvenyukireya muHong Kong.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweHong Kong haruwanikwe kune vanhu veHong Kong vanobata mukutengesa, kuchengetedza muHong Kong, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeHong Kong haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeHong Kong haisi yezvitendero zvechitendero uye masangano avo ekuHong Kong.
Residency nebasa rekudyara mu Hong Kong haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira muHong Kong.
Kugara Kwedu magweta muHong Kong haitsigire bhizinesi rekutengesera mumidziyo yezvinodhaka muHong Kong.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veHong Kong neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muHong Kong kubvumidzwa kwekunyorera Residency nekudyara muHong Kong.
Kugara nekudyara muHong Kong nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muHong Kong yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muHong Kong.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa nemutemo zveHong Kong, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nekudyara masevhisi kuHong Kong inopa yakachipa mitengo, ine yakanakisa inogona kubudirira chiyero cheHong Kong.
Isu takatora makore eruzivo rwevaviri Residency kuHong Kong inotsigira vatengi uye mhuri dzavo kuHong Kong.
Vanoziva Kugara nekudyara kwekukumbira kweHong Kong nevamiriri vepamutemo kuHong Kong vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veHong Kong kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuHong Kong uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuHong Kong
Isu tine ruzivo rwepasirese muResidency nekudyara kusanganisira Hong Kong, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuHong Kong kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu nenomwe dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara nekudyara kuHong Kong
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweHong Kong ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi yeHong Kong, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweHong Kong uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeHong Kong
Maitiro Ekubvumidza Basa kuHong Kong
Kwekugara kwenguva pfupi muHong Kong
Permanent Residence muHong Kong
Zvizvarwa zveHong Kong
Embassies uye ma Consulates eHong Kong
Mitero muHong Kong
Kugara neInvestment muHong Kong uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa kuHong Kong nezvezvinoitika kana zvemberi zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira pamwe nemhuri yako kuHong Kong nekudyara mari, isu semumwe wako kuHong Kong, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muHong Kong nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kweHong Kong, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare kuHong Kong, izvo iwe zvausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanachipangamazano kuHong Kong ichitigadzira one-stop shop yeHong Kong nenyika 106 .
"Isu takaisa makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi kuHong Kong mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweHong Kong nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye zvisungo muHong Kong nepasirese.
Kambani muHong Kong
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muHong Kong kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muHong Kong yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muHong Kong
Chero musimari anotamira kuHong Kong angangoda akaundi yako kubhengi muHong Kong uye account yebhangi yekambani muHong Kong, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Payment suo muHong Kong
Kana iwe uchida kubvunza muHong Kong, ye mhinduro dzemadhijitari muHong Kong senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muHong Kong kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Hong Kong kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga riripo bhizinesi muHong Kong kutanga pakarepo muHong Kong.
HR Services muHong Kong
Our kambani yevashandi muHong Kong inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muHong Kong vakasununguka.
Yechokwadi Virtual Nhamba dzeHong Kong
Bhizinesi foni nhare dzeHong Kong pamwe ne nhamba dzeHong Kong Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muHong Kong
Accounting, kushingairira kwakakodzera muHong Kong uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muHong Kong
Setup bhizinesi muHong Kong
Mushure mekugara patsva nekudyara kuHong Kong, setup bhizinesi mu Hong Kong.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muHong Kong
Kugadzira Webhu muHong Kong
Ecommerce Kuvandudza muHong Kong
Webhu kuvandudza muHong Kong
Kubudirira kweBlockchain muHong Kong
App Kubudirira muHong Kong
Software Kubudirira muHong Kong
SEO muHong Kong
Magweta eResidency neInvestment muHong Kong
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuHong Kong uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha kwazvo, kuHong Kong, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo kuHong Kong ine vamiririri vekunze vanoendawo kuHong Kong, isu tine mukurumbira wekutora yakanakisa sevhisi sevhisi. ruzivo rweHong Kong nematanho akajeka ekudyara mhinduro kune vanhu veHong Kong nemhuri dzavo. Kugara kwedu neboka rekudyara kuHong Kong kunopa mhinduro dzakagadzirirwa kubudirira kweVatengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mudzimai, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuHong Kong, pane yako mvumo yekugara muHong Kong inogamuchirwa.
Simba regweta reHong Kong rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara muHong Kong. Kana iwe uri muHong Kong kana kuronga kushanyira Hong Kong, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kuHong Kong ari kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe munharaunda yeHong Kong. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kubvumidzwa nemumiriri weHong Kong.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muHong Kong
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muHong Kong?
Kugara nekudyara kuHong Kong, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara kuHong Kong kuburikidza nekudyara muhupfumi hweHong Kong kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kugara kwekugara nekudyara kuHong Kong purogiramu yekudyara yeHong Kong inotsigirwa nehugaro neyakavanzika mabasa kuHong Kong, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muHong Kong, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara kuHong Kong uye nekugara kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuHong Kong, vachishanda zvakanyanya kugaro nekudyara vamiririri muHong Kong, uye akanakisa mafambiro ekuona nezvekupinda muHong Kong.
Kugara patsva nemabasa ekudyara mari kuHong Kong | Kugara nevamiriri vezvekudyara muHong Kong | Kugara nemagweta eInvestment muHong Kong | Kugara nemagweta ekudyara muHong Kong | Kugara nevanoona nezvekudyara kweHong Kong
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muHong Kong
Citizenship nekudyara kuHong Kong, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mugari weHong Kong kuburikidza nekudyara muhupfumi hweHong Kong kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe kuHong Kong. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuHong Kong, ugari nehurongwa hwekudyara kweHong Kong inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuHong Kong, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara kuHong Kong, ugari hwehukama nemagweta ekudyara kuHong Kong uye hukama hwakanakisa nekudyara vanachipangamazano veHong Kong, vachishanda pahukama hwakanakisa nevamiririri vekudyara muHong Kong, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muHong Kong.
Affordable Investor immigration services yeHong Kong | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika muHong Kong | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muHong Kong | Vanodhura vatyairi vekune dzimwe nyika magweta muHong Kong | Vanodhura vatyairi vekune dzimwe nyika vanachipangamazano kuHong Kong | Affordable immigration law firms kuHong Kong
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muHong Kong?
Yechipiri pasipoti muHong Kong, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weHong Kong kuburikidza nekudyara muhupfumi hweHong Kong kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, real estate, bhizinesi, hurumende zvisungo, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuHong Kong, yechipiri pasipoti chirongwa yeHong Kong inotsigirwa neyechipiri pasipoti masevhisi eHong Kong, kuburikidza nemagweta edu epasipoti epasirose muHong Kong, magweta echipiri epasipoti muHong Kong uye akanakisa echipiri mapasipoti mazano kuHong Kong, achishanda pane akanakisa echipiri mapasipoti vamiririri muHong Kong, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muHong Kong.
Yechipiri pasipoti masevhisi eHong Kong | Chechipiri pasipoti vamiririri muHong Kong | Yechipiri mapasipoti magweta muHong Kong | Yechipiri mapasipoti magweta muHong Kong | Wechipiri pasipoti vanopa mazano kuHong Kong
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muHong Kong?
Ndarama vhiza muHong Kong, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara mvumo yeHong Kong kuburikidza nekudyara muhupfumi hweHong Kong kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera yegoridhe visa kuHong Kong, goridhe vhiza chirongwa yeHong Kong inotsigirwa nemasevhisa egoridhe vhiza kuHong Kong, kuburikidza nemagweta edu egoridhe vhiza kuHong Kong, magweta egoridhe vhiza muHong Kong uye akanakisa egoridhe vhiza mazano kuHong Kong, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muHong Kong, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muHong Kong.
Goridhe visa services yeHong Kong | Ndarama vhiza vamiririri muHong Kong | Magoridhe vhiza magweta muHong Kong | Magoridhe vhiza magweta muHong Kong | Goridhe vhiza varairidzi kuHong Kong
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muHong Kong?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muHong Kong iUS $ 1,300,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuHong Kong yeResidency nekudyara here?
Ehe, gweta redu muHong Kong nevamiriri muHong Kong vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara muHong Kong.
Kugara nekudyara kuHong Kong kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuHong Kong uye Kugara nekudyara mari zvinodiwa kuHong Kong ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubvunza fizi reResidency neInvestment kuHong Kong, isu tinopawo yakawanda yakawanda zvimwe zvinotsigira zveKugarazve neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuHong Kong kana investor visa kuHong Kong?
Kugara nenzvimbo dzekudyara kuitira inogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuHong Kong kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuHong Kong kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuHong Kong kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuHong Kong kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuHong Kong kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuHong Kong kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuHong Kong kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuHong Kong kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuHong Kong kubva kuNepal, Kugara nekudyara kuHong Kong kubva kuIndia uye Residency nekudyara kuHong Kong kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeHong Kong
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuHong Kong
Mazwi akakosha muRudzi rwekugara neInvestment yeHong Kong
Alberta Hurumende Hong Kong Hofisi
Kutaurirana Kwekuzvibhadharira mari Yeseri-yedzidzo
Dhipatimendi rekuenda kune dzimwe nyika
Bhizinesi neDhipatimendi Rezvigadzirwa
Commerce uye Economic Development Bureau
Consadors General yePeople's Republic of China muToronto
Hong Kong Airport Chiremera
Consadors General yePeople's Republic of China muVancouver
Yunivhesiti Grants Dare
Hong Kong Raibhurari
Link to Dhipatimendi Rekupinda muHong Kong , Inotarisira kuumba marongero ekuchimbidza Kufamba kwevanhu muHong Kong
Hong Kong Nzvimbo